बिष्णु पौडेल: दीपनगरदेखि बालुवाटारसम्म | रुपान्तरण
बिष्णु पौडेल: दीपनगरदेखि बालुवाटारसम्म
८ भाद्र २०७७, सोमबार १९:५९
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको राज्यसत्ताका हस्ती मानिन्छन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेल । उनको ब्यक्तित्वमा बाहिरी चमक देखिदैन । निकै भित्री हिसावले उनी प्रधानमन्त्री ओलीका अन्तरंग हुन ।
मदन भण्डारीको आँखामा चढेकै कारण राजनीतिक उन्नति गरेका पौडेलले राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीसंग पनि घनिष्ट सम्बन्ध राखेका छन । सत्ताको तिकडीमा टिक्ने कलामा माहिर मानिन्छन बिष्णुजी । कमाउने कलामा पनि उनी माहिर छन ।
बुटवलको सुकुम्वासी बस्ती दीपनगरदेखि काठमाडौको बालुवाटारसम्म बिष्णु पौडेलको यात्रा पक्कै सुखद रहेकोछ ।
स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका–१० राङखोला डिइकुनामा २०१६ सालमा जन्मेका बिष्णु पौडेलले २०३४ सालताका आफैले अध्ययन गरेको स्थानीय चन्द्रकमला नीमाविमा केही समय शिक्षण पेशा गरे । त्यतिबेलै उनी पञ्चायत बिरुद्धको आन्दोलनमा होमिइसकेका थिए ।
पञ्चहरुको निशानामा परेर भूमिगत भएका पौडेल २०३७ सालमा पार्टीका दस्ताबेज भारतबाट नेपाल ल्याउने क्रममा मोदनाथ प्रश्रितसंगै पक्राउ परे । उनलाई भैरहवा जेल पठाइयो । जेल परेको ४/५ महिनामा प्रश्रित र पौडेल भैरहवा जेल ब्रेक गरेर भागे । त्यसपछि पौडेललाइ नेकपा माले पार्टीले पाल्पा खटायो । पाल्पामा पौडेलसंगै काम गरेका धनेन्द्र घिमिरेका अनुसार उनी २०४२ साल सम्म पाल्पामै जिल्ला कमिटि सदस्य रहेर पार्टी संगठनमा काम गरे ।
त्यसपछि अर्घाखाँची, गुल्मी,कपिलबस्तु, पाल्पामा पार्टी सचिव भएर पनि काम गरे । भूमिगतकालमा पवन नामले चिनिन्थे बिष्णु पौडेल । स्थानीयका अनुसार, त्यो बेला स्याङजामा उनको गाँउलाइ पञ्चहरुले अखडा बनाएका थिए । त्यसैकारण, उनी परिवार भेटन गाँउ जान सकेनन । उनका कार्यकर्ताले परिवारलाइ पाल्पा ल्याएर भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाइदिन्थे ।
२०४७ सालमा मदन भण्डारीले पौडेललाइ पार्टीको केन्द्रिय कमिटिको सदस्य बनाए । उनले महाकाली अंचल इन्चार्जको जिम्मेबारी पाए । २०४९ सालको पाँचौ महाधिवेशन पछि उनी फेरी केन्द्रिय कमिटिमा निर्वाचित भए । त्यसपछि लुम्बिनी अंचल इन्चार्ज भए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी पाल्पाको क्षेत्र नं. ३ बाट लडेर जिते ।
पहिलो पटक सांसद बने । २०५३ सालमा उनी युवा तथा खेलकूद मन्त्री बने । २०५६ सालमा रुपन्देहीको क्षेत्र नं. ४ बुटवलबाट उठेर काँग्रेसका सुर्यप्रसाद प्रधानसंग हारेका थिए । त्यसको बदलामा पौडेलले २०६४ सालमा प्रधानलाइ नै हराए । २०७० को चुनावमा तत्कालीन माओवादीका बाबुराम भट्टराइलाई हराए भने २०७४ को निर्वाचनमा काँग्रेसका युवराज गिरीलाइ हराएर बुटवलमा ह्याट्रिक गरे ।
पौडेल २०६५ मा जलश्रोत मन्त्री,२०६७ मा रक्षामन्त्री र २०७२ मा अर्थ मन्त्री बने । नेकपा एमाले छँदासम्म उपमहासचिव रहेका पौडेल नेकपा बनेपछि महासचिव बने । पटक पटक मन्त्री हुँदा पनि उनले आफनो जन्मथलोलागि केही नगरेको र फर्केर पनि त्यता नगएको स्याङजाबासीकोगुनासो अहिले पनि सुनिन्छ ।
विशेषगरी राङखोलाबासीले चक्रकमला स्कुलको भवन निर्माणका लागि पछिल्लो पटक केही रकम छुट्याउने बाहेक सम्झन योग्य अरु कुनै काम नगरेको गुनासो गर्छन । पाल्पाबाटै पहिलो पटक चुनाव जितेर सांसद र मन्त्री बन्दा समेत जिल्लाकालागि कुनै योगदान दिन नसकेको गुनासो पाल्पालीको छ । तानसेनको मुटुमै रहेको टुडिखेलमा थुप्रै राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरु आयोजना हुन्छन ।
तानसेनबासीले त्यही टुडीखेलको व्यवस्थित विकास र खेलकुद मैदान निर्माणकालागि पहल गरीदिन पौडेलसंग आग्रह गरेका थिए । उनी खेलकुदमन्त्री हुँदा उनले जनताको यो आग्रहको उपेक्षा गरे । निर्वाचन जितेपछि फर्केर पाल्पा नगएकाले पौडेलले दोश्रो पटक पाल्पाबाट चुनाव लडने आँट गर्न सकेनन ।
तर राजनीतिले उचाइ लिदै गएपछि भने पौडेलले बिगतका कमजोरीलाइ सुधार्ने प्रयास गरेको भन्नेहरु पनि छन । २०७२ मा अर्थमन्त्री भएपछि उनले स्याङजामा आफुले अध्ययन गरेको स्कुलका लागि बजेट छुट्याए । पाल्पामा काली गण्डकी लिफ्ट खानेपानी आयोजना,बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग संगै पाल्पा र रुपन्देहीमा महत्वपूर्ण आयोजनालाइ उल्लेख्य बजेट बिनियोजन गरेर उनले विकासप्रेमी नेताका रुपमा आफनो छवि बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर ती आयोजना कार्यान्वयनमा भने उनको उति सारो चासो देखिदैन ।
उनका एक छोरा र एक छोरी छन । स्थानीयका अुसार २०४२ सालमा छोरी जन्मिदा मण्डलेले परिवारलाइ गाँउमा बस्नै नसक्ने गरी सताएपछि पौडेलले परिवारलाइ बुटवल सारेका हुन । उनकी छोरीले बुटवलकै होराइजन बोर्डिङबाट एसएलसी पास गरेकी हुन । स्याङजाको घरखेत निकै सस्तोमा बेचेर हिडेका भनिएका पौडेलले सुरुमा बुटवलको दीपनगरमा सुकुम्बासीको जग्गा लिएर बसे । उनैका तत्कालिन छिमेकीका अनुसार बुटवल झर्दा उनको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो । पौडेल र उनको परिवारको जीवन शैली निकै साधारण थियो ।
सुकुम्बासी आयोगबाट पुर्जा लिएपछि उनले दीपनगरको जग्गा बेचे । त्यसपछि भने उनको परिवारको आर्थिक अबस्था फेरिएको हो । दीपनगरको जग्गा बेचेपछिउनले नेकपाका स्थानीय नेता नन्दीकेशर ढकालको घर छेउमा एक कठ्ठा जग्गा लिएर टिनले छाएको एकतले घर बनाएका थिए । उनका बुवा,श्रीमती छोरा छोरी त्यही बस्थे । २०६४ मा चुनाव जितेपछि परिवारलाइ काठमाडौ लगेका हुन । केही बर्ष पछि बुटवलको त्यो घर पनि बचे ।
जानकारहरुले नवलपरासीको भूताहामा रहेको खेत बालुवाटारको जग्गासंग सट्टीपट्टी गरेको बताएपनि पौडेलले सो जग्गा बेचेर बालुवाटारमा जग्गा किनेको लिखित वक्तब्य नै जारी गरे। पौडेल नजिकका नेता कार्यकर्ता बालुवाटारको जग्गा स्याङजाकै जग्गा बेचेको पैसाले किनेको दावी गर्न चुक्दैनन । तर पौडेललाइ बुटवल झर्दा देखि नजिकबाट नियालेकाहरुले भने राजनीतिले उचाइ लिएपछि बल्ल पौडेलको आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढेको टिप्पणी गर्छन ।